Hachapuri in Ajarian Art sens - mazano eimba nebindu
22.05.2016 Yakatumirwa na: Art Sense
Kuronga Kwekudya uye Kushongedza, Kukurumidza, nyore, kunonaka!, Recipes, Zvinhu zvakabikwa
Khachapuri (ChiGeorgian - ხაჭაპური kubva ხაჭო (hach) - kanyumba tchizi uye პური (cigar) chingwa) yakajairika chiGeorgia chinogadzirirwa mumarudzi akasiyana gumi nemaviri. Iyo inonyanya kuve nehupfu nehupfu uye yezai zvinhu. Munzvimbo dzakasiyana dzeGeorgia dhishi iri rine misiyano yakakosha mukubikwa - kubva pakabikwa kesoda kune yogati, pakukanywa nembiriso uye nyowani, kusanganisa cheeseses dzakasiyana, kuwedzera miriwo uye zvimwe zvigadzirwa, uye zvakare pakuumbwa - kubva pakusaswa marashi kuvharwa keke, kune yakaomeswa yakagochwa senge pie. Iyo vhezheni vhezheni yacho inoshandisa mombe dzeSulguni / Suluguni (chiGeorgia სულგუნი, სულუგუნი) kana zvimwe zvadzo zvechinyakare. Pano tichakuratidzai kugadzirira kwe khachapuri muAjarian. Adzharia (ChiGeorgia აჭარა - Achara) inoshanda yakazvimiririra yeGungwa reNhema repabhuru ine guta guru Batumi. Mune iyi nzira, khachapuri yakaumbwa seigwa nechando nezai rose uye bhotela.
300y hupfu hwegorosi
200ml mukaka mutsva
1 / 3 cube yemutsva mbiriso kana 1h.l. pakaoma
1 / 2 zai
1 / 2h shuga
3 / 4 munyu
1 / 2 mafuta omuorivhi kana mafuta
1 / 2 yakapararira zai Zvekurongedza:
500y cheke tchisi musanganiswa
5 Mazai - Kubheka
50y butter butter
Gura zai rimwe chete kuita maviri - imwe hafu yehupfu uye imwe yekuparadzira. Kanda zvigadzirwa zveupfu zvakatsiga uye zvinyoro nyoro nekunyungunisa mbiriso muchikamu chemukaka wakanyoroveswa mukaka uye shuga uye, mushure mekudambura musanganiswa, nezvimwe zvinwiwa. Wedzera mumwe mukaka kana upfu sezvazvinodiwa. Gadzira bhora, mafuta uye kufukidza kuti simmer kweinenge awa neawa. Wobva wasanganisa zvakare uye wobva waiisa simmer zvakare kweinenge 30 min .. Govanya 5 kuita mabhora akaenzana, uye dambura bhora rimwe nerimwe kuita rakatetepa. Sendesa miromo miviri yakatarisana yeupfu hwakatemwa kunze kwekusangana, wobva wadzvanya padivi, isa pepa mune tray yekubheka uye uvhure pakati kunge chikepe sekurairwa. Paradzira zai yakarohwa uye isa munzvimbo yekudyara umo unogona kusanganisa grated cheese, cheki uye cottage cheese nemazai maviri. Bika mune preheated 200 degree ovheni kusvika goridhe brown, wobva wabvisa, voita zororo sezviri kudiwa mukati mechikepe chega chega uye wopwanya zai rimwe mukati. Bika zvakare kweinenge 5 maminetsi - kusvikira machena machena, yolks inofanira kuva nyoro. Isa imwe bundu remafuta uye mushumire. Unogona kusasa nezvinonhuwira kuravira.
ChiGeorgian cuisine, ChiGeorgian pizza, Chireshi cheGeorgian, Chingwa cheGeorgian, Chikafu cheGeorgian, pfungwa, khachapuri, mapikicha, khachapuri, mazano epamba, zvemukati dhizaini, fenicha, zvemukati mazano, dhizaini mazano, imba yemazuva ano, kurongedza mazano, hunyanzvi mazano
Spring Home mazano
Cherry matawi - ane mavara akanaka matsva zano! Ruva ruva inozivikanwa rinoita mabukira mashoma ...
Iyo kicheni ndiyo nzvimbo mumba iyo iyo mukuwedzera kune zvinonakidza zvigadziro sarudzo, iyo yakawanda ...
Izvozvi zvataunza iwe kuRin pizza pizza, tinogona kuisawo ...
Kufanana nemagadzirirwo mazhinji akagadzirwa, iyo Attic yakagadzirwawo nemurume wechiFrench. ...
Bindu tafura nefiriji
Matafura egadheni inzvimbo isingaenzaniswi yemhuri kana kuungana kuusiku manheru anodziya Chero ...
Zviitire wega tende weIndia
Zviitire wega tende weIndia uye unounze mufaro usingaenzaniswi kuvana! Mazhinji e ...